टिकटक कलाकार निकिशालाई सडकमै यस्तो गर्ने को हुन् ? प्रहरीले थाल्यो कारवाही (भिडियो हेर्नुस्) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/टिकटक कलाकार निकिशालाई सडकमै यस्तो गर्ने को हुन् ? प्रहरीले थाल्यो कारवाही (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । टिकटक कलाकार निकिशा श्रेष्ठमाथि काठमाडौको सडकमै भएको दु’ब्र्यव’हारको प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । त्यस्तो गर्नेलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाही हुने भएको छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार सा’इ’बर ब्युरोलाई श्रेष्ठमाथि भएको घटनावारे छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। श्रेष्ठलाई सडकमै नराम्रो शब्द प्रयोग गरी एक समूहले दु’ब्र्यव’हार गरेको देखिन्छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा सो भिडियो सार्वजनिक गरिदिएपछि प्रहरीको पनि ध्यानाकर्षण भएको हो । अहिले सो भिडियो पनि भाइरल भएको छ ।
घटना राजधानीको कुन ठाउँमा भएको हो भन्ने पनि खुलीसकेको छैन । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायतले उक्त भिडिओबारे छानबिन गरी दो षीलाई कारबाही गर्न सा’इ’बर ब्युरोलाई पत्राचार गरिएको बताए।
भिडिओमा श्रेष्ठलाई लक्षित गरी नराम्रो शब्द प्रयोग गरीएको छ । श्रेष्ठले पनि ति समुहलाई ल’खे’ट्न खोजेको भिडियोमा देखिन्छ। पहिले निकेश नाम भएकी निकिशा अहिले आफूलाई केटी भनेर चिनाउन चाहन्छन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनका विभिन्न भिडिओ चर्चामा छन्।